Expressing Myself: विम्बको क्षेप्यास्त्र
पुस्तकको भूमिकामा अभि सरले भनेका छन्, “निरजका कविता लघु नाटक हुन्, कथानक हुन् र उर्जाशील डायरी हुन् ।” पुस्तकका कवितामा पात्र छन्, विषय छन्, द्वन्द्व छन्, घटनाका उतारचढाव छन् र सहीसलामत अन्त्य पनि छन् । यसअर्थमा कविताहरू कविता मात्रै नभएर कहिले लघुनाटक भएका छन्, कहिले ‘लङ फिक्सन’ भएका छन्, ‘सर्टस्टोरी’ भएका छन् र कुनैबेला महाकाब्यमा ब्यक्त गर्न सकिने कुरा दुई–चार लाइनमा असामान्य तरिकासाथ प्रस्तुत भएका छन् । सिंगो जीवनलाई चार लाइनमा संक्षेपिकृत गर्न सकेर डा. निरजले स्वयंलाई कवि निरजको लाइसेन्स दिन सकेका छन् ।
कवितामा भूमिका लेखेका केही हस्तीहरूले निरजलाई कलिल जिब्रान, जोन किट्स, चेखोब र टिएस एलियटसँग तुलना गरेका छन् । तर निरजलाई ती अनुहारसँग गरिएको तुलना मलाई असजिलो लाग्यो । त्यो तुलना असजिलो अफवाहको प्रसारझैँ लाग्यो । निरज किट्स हुन सक्दैनन् । एलियट निरज हुनै सक्दैनन् । निरजसँग प्रतिभाशाली साहित्यकार हुने लक्षण प्रशस्त छन् । यद्यपि, प्रतिभालाई उनले अझै केही माझ्नु पर्ने ठाउँ छन् । केही कवितामा उनले उठान गरेका विषय गज्जबका छन् तर तिनको बैठान गर्नचाहिँ उनी चुकेका छन् । यसअर्थमा उनले आफैलाई अझै माझ्नु पर्छ । बलराम अधिकारीको सुन्दर अंग्रेजी अनुवादसहितको कवितामा प्रयोग भएका विम्बहरू केही प्रयोगशील छन् केही नयाँ र केहीचाहिँ पुरानै खालका । फाट्टफुट्ट देखिएका ब्याकरणीय त्रुटीले पुस्तकको वजन केही घटाएका छन् । कविताको भाषा निखारिएको र चुस्त छ । न्यारेटर एक्लैएक्लै गुनगुनाएझैँ लाग्ने सबैजसो कविताहरूमा सहि विम्ब र सन्तुलित प्रस्तुतीको संगीत गुन्जिन सकेको छ ।
“कवितामा पनि राजनीति हुँदोरैछ....” कुनैसाँझ नयाँबसपार्कमा भेटिँदा कवि भट्टराईले मसँग यसो भनेका थिए । नयाँ बसपार्कमा उनले मेरा लागि पुरानो र आफ्ना लागि नयाँ कुरा सुनाएका थिए । यही पुस्तक प्रकाशन गर्न केही नाम चलेका प्रकाशनमाझ जाँदा उनी खिन्न बनाइएर फर्काइएका रहेछन् । यो पुस्तक पढिसकेपछि फेरि पुष्टि भएको बुझेँ “कवितामा पनि राजनीति हुँदोरैछ....” किनकि भट्टराईजस्ता प्रतिभाशाली कविको पुस्तक प्रकाशन गर्ने रुचि नदेखाउनु प्रकाशकले गर्ने राजनीति भन्दा अर्थोक केही होइन ।
कविता–किताब प्रकाशन गर्न हिच्किचिाएका प्रकाशकका लागि यो किताब सही दनक हुन सकेको छ । किनकि यसमा उत्कृष्ट किताबमा हुनुपर्ने गुण छन् । यसर्थमा, राम्रो कविता हुन पूरा गर्नुपर्ने रेस ‘धुवाँको धागो’ले सकुशल पार गरेको अनुभूति पाठकलाई पक्कै हुनेछ ।
धुवाँको धागो (दि थ्रेड्स अफ स्मोक)
स्रष्टा : निरज भट्टराई
प्रकाशक : ऋतुरंग फाउन्डेसन
पृष्ठ : ११९
मूल्य : रु. ३५०/-
Free ebooks September 19, 2014 at 10:36 PM
Safal Ghimire November 24, 2016 at 7:29 AM
CP Aryal (सिपी अर्याल) November 24, 2016 at 8:50 AM
haha true Safal.
‘केन्द्र’ भत्काउने डेरिडा